Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Xukuumaddii DDS iyo Odayadii deegaanka oo Addis soo gaadhay
Xukuumaddii DDS iyo Odayadii deegaanka oo Addis soo gaadhay
August 31, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL:Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addisababa ayaa sheegaya in dhamaan golihii Wasiirada DDS, oday dhaqameedyadii Deegaanka ay dhamaantood qaarna soo gaadheen caasimadda Addisababa qaarna ay jidka kusoo jireen si ay uga qaybgalaan aaska Qaran ee loo sameeynayo Raisul Wasaare Males Zenawi.Warbaahinta Xaajo oo khadka Telka kula xiriirtey Maxamuud Xaaji Cabdishakuur oo ah la taliyaha madaxweynaha DDSI dhanka xiriirka qurba joogta iyo maalgashiga ayaa noo sheegey in dhamaan xukuumaddii ay kasoo dageen Addisababa ayna kasoo baxeen magaalada Jijiga. “ Xukuumaddii waxba kama maqno waxaa kale oo iyaguna jidka soo maraya odayaashii deegaanka oo dhan 200 oo iyaguna saaka kasoo baxey Jijiga qaarna ay soo gaadheen caasimadda.Waxaana ka qaybgalaynaa aaska qaran ee maalinta Axadda ah ka dhici doona caasimadda Addisababa” ayuu yidhi Cabdishakuur oo markaan la hadalney waxyar ka hor ka dagay diyaaraddii wadday waftiga.
Dhamaan waxgaradka culimada, aqoonyahanada iyo dhamaan machadyada Waxbarashada oo ay ugu horeysey wafti kasocota jaamicadda Addisababa iyo wakiilo matalaya ardeyda Deegaanka ayaa dhamaantood kusoo qulqulaya caasimadda Addisababa si ay dhamaantood uga qaybgalaan aaska.
Guurtida deegaanka oo ay horseedayaan Garaadka beesha Absame Garaad Maxamuud Garaad Xirsi Dool iyo Ugaaska beesha Ciise Ugaas Mustafe Maxamed Ibraahin ayaa iyagu soo gaadhay caasimadda Addisaba iyagoo ay weheliyaan dhamaan odayada sagaalka gobol ee deegaanka.
Aaska ayaa lagu wadaa inuu dhaco maalinka Axadda ah magaalada Addisababa iyadoo dhamaan safaaradaha Ethiopia ku leedahay caalamka ay si toos ah u daawan doonaan aaska qaran ee loo sameynayo Raisul Wasaare Zenawi.Waxaa magaalada Addis kusoo qulqulaya dhamaan madaxda waddamada saaxiibada ah. Madaxda DDSI ayaa ku laabanaya caasimadda Jijiga maalinka Isniinta ah kadib marka aasku dhaco.
Magaalada Addisababa ayaa la ciiraysa marti sharaf aad ubadan oo kasoo hayaamey daafaha caalamka iyo gobolada kala duwan ee qawmiyadaha Ethiopia oo ay ugu horeyso qawmiyadda Soomaalida dalka Ethiopia.